အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အိပ်မက်ထဲက ကချင်မြေ
ဆရာ့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အရင်က မသိခဲ့တဲ့ ကချင်ဒေသရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအချို့လည်း သိလာခဲ့ရတယ်။ နယ်စပ်မျဉ်းနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ကချင်ရွာကြီး သုံးရွာဟာ ( ယခင်က မြန်မာပြည်ပိုင်နက် စင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါရက်ကယ်နဲ့) ဟိုးယခင်ခါက ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးရဲ့ လက်ထက်မှာ တရုတ်ပြည်ပိုင်နက်ထဲကို ထည့်ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတာပါဘဲ။ သိသူများကတော့ သိကြပါရဲ့.. ဒါပေမဲ့ လက်လွန်ကုန်ပါပြီ...း(
ပေ ၇ဝဝဝ ကျော် အမြင့်မှာရှိတဲ့ ဘောလုံးကွင်းလို့ ဆိုပါတယ်.. ကြည့်ပါဦးတော့... တိမ်ကိုတောင် လှမ်းပြီး ဆွတ်ခူးလို့ ရတော့မဲ့အတိုင်း
(ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ဘောလုံးကန်လိုသူများ စာရင်းပေးပါ) တောင်ထိပ်ပေါ်ကို ခြေလျှင် တက်ပြီးမှ ဘောလုံးကန်ရပါမယ်... :P
တောမီးကို ငြိမ်းသလို စစ်မီးကိုလည်း ငြိမ်းကြစို့...
နွားနောက်နဲ့ တိဘက်နွားရဲ့ ကွာခြားချက်က အမွှေးရှည်တာနဲ့ မရှည်တာ ကွာခြားပြီး ဦးချိုလည်း ကွဲပါတယ်။ တိဘက်နွားဟာ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီကချင်တောင်ပေါ်မှာဘဲ ရှိဟန်တူပါတယ်.။
ရာချီပြီး ရှိတဲ့ ဆရာရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးကို ကျွန်မအနေနဲ့ တင်ပေးချင်ပေမဲ့ မဖြစ်နို်င်ကြောင့် အတူ ဓာတ်ပုံများ အားလုံးကို slide show လေးဖန်တီးထားပါတယ်.. လှပသာယာတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အယ်လ်ဆိုင်းဇီရဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပေါင်းစပ် ဖန်တီးထားတာမို့ အချိန်လည်းရမယ် စိတ်လည်း ဝင်စားတယ် ဆိုရင် အားပေး ကြည့်ရှုသွားပါဦးလို့နော်။
မိတ်ဆွေငယ်သူချင်းများ အားလုံးလည်း အေးချမ်းသာယာတဲ့ ကချင်မြေရဲ့ အလှတွေကို တွေ့မြင်ကြပြီ ထင်ပါတယ်နော်.. တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ခရီး သွားလာဖို့ ကောင်းတဲ့ ဒေသတွေ၊ အင်မတန်မှ သာယာတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်. အခုမြင်နေရတဲ့ နေရာတွေဟာ ပြည်ပခရီးသွားတွေ မပြောနဲ့ ပြည်တွင်းက လူတွေတောင် ရောက်ဖူးဖို့ မလွယ်သေးတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်.။ သွားဖို့ လာဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဒီနေရာက အလှတွေဟာ လူသူမသိဘဲ ရှိနေခဲ့ရတာပါ။ အိမ်မက်ဆန်ဆန် လှပလွန်းတဲ့ ဒီဒေသရဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကို ချောမွေ့အောင် လုပ်မယ်၊ နယ်မြေအေးချမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်မယ်၊ ဆောက်သင့်တဲ့ အဆောက်အဦး၊ ဧည့်သည်တွေတည်းခိုဖို့ တည်းခိုခန်း စသည်တို့ ကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းမယ် ဆိုရင် ဒီလို သာယာ လှပတဲ့ နေရာတွေကို လာချင်၊ သွားချင်ကြတဲ့ သူတွေ အများကြီး ဖြစ်မှာပါ။ ပြည်တွင်းက သာမက ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေပါ အလည်လာ၊ အပန်းဖြေချင်အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ.. ဝေးဝေးကို မကြည့်ပါနဲ့ .. ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာတင် အဖိုးတန်အလှအပများ ရှိနေပါတယ်..
ကလေးတို့ရေ.. မင်းတို့ရဲ့ အနာဂတ်လေး လှပ သာယာပါစေ.......
ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ ပိုင်ရှင် ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်ကလည်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဒီလောက် သာယာတဲ့နေရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာက မြန်မာပြည်တင်မက ကမ္ဘာကပါ သိစေချင်တယ်.. လာလည်စေချင် ပါတယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ ဒေသကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာတွေကို အထင် အရှား မြင်တွေ့လိုက်ရလို့ ဆရာ့ ကို လေးစား မိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာတွေ အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း ပြောကြား ပါရစေရှင်.. အေးချမ်းလှပတဲ့ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည် နယ်မှာ တောက်လောင်နေ တဲ့ စစ်မီးတွေ၊ အမုန်းမီးတွေ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းအေးပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
အဲဒီဒေသ ဒီပိုစ့်ထဲက ဓာတ်ပုံများ အားလုံးဟာ ဆရာ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများဖြစ်သောကြောင့် အခြားသော မီဒီယာများမှ ကူးယူဖော်ပြ အသုံးပြုလိုပါက ဆရာ့ထံ ဆက်သွယ် ခွင့်တောင်းပြီးမှသာ အသုံးပြု ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ဆရာရဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာလည်း ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100001441728322 ) လှပသော ဓာတ်ပုံများကို သွားရောက် ကြည့်ရှု ခံစားနိုင် ပါတယ်ရှင်...
49 Responses to “အိပ်မက်ထဲက ကချင်မြေ”
It's amazingly beautiful... Thanks for sharing sis chaw and sayar Nyein Aye Eain :))
OMG! Is this our nation. I don't believe that my country is suchabeautiful haven.
Thanks ama chaw.
Woooooo! We've ice mountain. Wooo!!!!!!!!!!
မနက်အစောကြီး ခေါင်းစဉ်မြင်ပြီး ပျောက်သွားကထဲက မတင်မချင်းထိုင်စောင့်နေတာ ချောရေး)။
သာယာလှပပြီး သဘာဝရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ကချင်မြေလေးအဖြစ် တည်တံ့နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ စေတနာပါပါ တင်တဲ့ပို့စ်လေးအတွက် ချီးကျူးမိပါတယ်။
လှလိုက်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်...တနေ့ တော့ ရောက်ဖူးချင်တယ်..
အေးချမ်းလိုက်တဲ့ ပုံတွေ .
(စကားမစပ် မနက် က၀င်မရဖြစ်သေးတယ် .ဘလမှာ ကတက်နေတယ် .မကြီးဘလထဲဝင်မရလို့း(
ခုမှရတယ် .တော်သေးတယ်း)
ကချင်ပြည်နယ်သားစစ်စစ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ တောင်ဇလပ်ပန်းရှိတာ မသိခဲ့တာကို ရှက်မိတယ် မချောရယ် နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ အဲဒီတောင်ပေါ်လမ်းလေးတွေကို လျှောက်ဖူးကြည့်ချင် တယ်၊၊
သွားဖို့အခွင့်မကြုံသေးဘူး အမတွေတော့မြစ်ကြီးနားမှာနေခဲ့ဖူးတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့တချိန်တုန်းကဆိုတော့ ရောက်ဖြစ်ဖို့ အားမသန်ခဲ့ဘူး။ အားတော့မလျှော့သေးဘူး သွားဦးမယ် ချင်းပြည်ဖက်လည်းသွားချင်သေးတယ် တပြည်လုံးမနှံ့သေးတာကိုပဲ စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေပြန်ရော..
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး မွေးရပ်မြေကိုလွမ်းသွားတယ် ချောရေ-
မရောက်ဖြစ်တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်သွားပြီ။
တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်အောင် အလည်သွားဦးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် အခုအထိ ပြန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလေ။
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ဆရာနဲ့ ဓါတ်ပုံတင်တဲ့ မချော ကျေးဇူးအထူးခင်ဗျာ...
မချောတို့ ကျေးဇူးနဲ့ မြင်ရခဲတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အလှအပတွေကို
တအံ့တသြ ငေးကြည့်သွားပါတယ် :)
ချောရေ....ဒီပို့စ်လေးကို သိပ်ချစ်တာပဲ ။ ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ညီမလေးအတွက် အိပ်မက်ထဲက ဘုံနန်းတခုပါ ။ သိပ်လှတဲ့ ကချင်ပြည်ကို တစုတစည်းတည်းခုလိုလုပ်ပေးတာ သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ ။ ဆရာ့ကိုကောပေါ့ ။ ကချင်မြေအလှ ကမ္ဘာတည်ပါစေ ။ ကချင်မြေလေး စစ်မီးတွေဝေးလို့ ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့လည်း တောင်းဆုပြုမိပါတယ် ။
ဓါတ်ပုံတွေက ပြတ်သားပြီး ရှု့ ခင်းတွေက လှလိုက်တာ။
ပုံတင်ပေးသူချောနဲ့ရိုက်တင်ထားသူကိုပါ ကျေးဇူးတင်တယ်
တောင်ဇလပ်ဆိုတာ အခုမှ တွေ့ဖူးတော့တယ် မချောရေ.. အ၀ါရောင်ရော ကချင်မှာရှိမလားမသိဘူး။ ဒီလောက်လှတဲ့ ရှု့ခင်းမျိုးလေးတွေ တွေ့ရလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့တဲ့ ဆရာ့ကိုရော မချောကို ရော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ....
ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးက လှပါတယ်ဆိုတာထပ်ကို လှနေတော့တာ ကြည်နူးမိတယ်ဗျ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာလည်း ဒီလို လှပမှုတွေ ရှိသေးတာပဲလို့ တွေးပြီး ဂုဏ်ယူမိတယ် ။
စစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကကချင်မြေရဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ရုက္ခဗေဒပညာရှင်ကြီး Kingdom-Ward ကကွင်းဆင်းပြီး မျိုးစိပ်သစ်တွေအများကြီး တွေ့ ပြီး ၀ိတိုရိယ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ဥယျာဉ်ကိုလက်ဆောင်ဆက်သခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဇလပ်တွေ လည်းပါတယ်။ မျုိးသစ်တွေ စပ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ကို လည်းဖြန့် နုိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ ကုို စပွန်ဆာလုပ်ပြီးသူသယ်လာတဲ့မျိုးစေ့တွေက နေလည်း မျိူးတွေပွားယူခဲ့ကြတယ်။
အထက်ကလင့်မှာ သူ့ စာအုပ်တွေ စိတ်ဝင်စားရင် ရှာကြည့်နုိုင်ပါတယ်။ ကုိုယ်စာတမ်းတင်တုန်းက ကချင်ပြည်နဲ့ ဆုိုင်တာတွေ အများကြီး ဖတ်ခဲ့စုခဲ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငှက်နဲ့ ဆုိုင်တာတွေပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ကချင်ပြည်ကို အမြဲတမ်းမပျက်မစီးရှိစေချင်တဲ့စိတ်က ပြင်းပြင်းပြပြရှိပါတယ်။ ချောကို ရောဆရာ့ကုိုရော ကျေးဇူးအများ ကြီးတင်မိပါတယ်။ ဒီပုံတွေဟာ ရက်တုိုနဲ့ လည်းမရနုိုင်သလို လွယ်လွယ်နဲ့ လည်း မရနုိုင်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ရေခဲတောင်ဘက်တွေမှာဆုို ရာသီဥတုကချက်ချင်းချက်ချင်းပြောင်းတော့ တော်ရုံဇွဲ နဲ့ လုံးဝ ဒီလိုပုံတွေမရနုိုင်ပါဘူး။ သိပ်အဘိုးတန်တဲ့ပုံတွေ မြင်တွေ့ ခံစားရလို့ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
လှလိုက်တဲ့ ရှုခင်းတွေ မချောရေ..း)).. တ၀ကြီး ကြည့်ရှုခံစားသွားပါတယ်...း)
လှလိုက်တဲ့တောင်တန်းတွေ.....ဒီလိုရှုခင်းမျိုးကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ မထားခဲ့ရစ်ချင်ဘူး.... ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြပါလို့ ပြောချင်တယ်...။ ကျမတို့ တနိုင်ငံသားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်...။
ဓါတ်ပုံတွေ လှလိုက်တာ မချောရေ..၊ ကြည့်လို့ကို မဝနိုင်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် ကချင်ဒေသရဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ နေရာတွေကို တခါမှ မရောက်ဖူးသူ တွေအတွက် အဖိုးတန်လိုက်တာ..၊ မှတ်တမ်းတင် ထားတဲ့ ဆရာငြိမ်းအေးအိမ် ကိုရော၊ ပြန်လည် ဝေမျှတဲ့ မချောကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို သနားတယ်
ဒီလိုလှပတဲ့နေရာတွေကို ရောက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမရှိလို့
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ ၀မ်းလဲဝမ်းသာ၊ ၀မ်းလဲနဲသလိုပဲ။ ဒီလို လှပတဲ့ရှုခင်းတွေရှိလုိ့ ၀မ်းသာတယ်။ ၀မ်းနဲတာက ဒီလို ရှုခင်းမျိုးတွေကို
မြန်မာပြည်သားတွေ မသိကြဘူး။ အဆိုးဆုံးက
ကချင်ပြည်နယ်သား ကျွန်တော် ဒီနေရာတွေရှိမှန်း ခုမှသိ၇တယ်။
ချစ်သော ကချင်မြေ ထာဝရငြိမ်းချမ်း စိမ်းလန်းပါစေ..
တောင်ဇလပ်ဆိုတာ မချမ်းဘော သွားတုန်းက မြင်ဖူးသလားလို့ ......
ဖြစ်ပြီးမြန်မာန်ုင်ငံကိုနှံ့အောင်မရောက်ဖူးသေးဘူးဖြစ်နေတယ်...ရောက်အောင်တေံသွာချင်သေးတယ်ချောရေ..ချစ်သောကချင်မြေအမြဲတန် ထာဝရငြိမ်းချမ်း စိန်းလမ်းပါစေ...
ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ ဆရာ ငြိမ်းအေးချမ်းကိုရော..
ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့.
ွှဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး မျက်စိပသာဒ လှသလို ဒါဟာ ငါတို့ မြန်မာပြည်ပါလားဆိုပြီး ၀မ်းသာကြည်နူးပြီး ပီတိစိတ်နဲ့ ကြည့်ရတာ အရမ်းကိုနှစ်သက်မိတယ်..
ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖေဖေတို့ပြောပြောနေလို့ ကချင်မြေကို ရင်းနှီးနေခဲ့တယ်။
စစ်ပွဲတွေမရှိပဲ လူတိုင်းခရီးသွားနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။
မချော သွားလည်ရအောင် သူ့ဘာသာဖြစ်နေတဲ့ကျောက်စားပွဲနဲ့ကျောက်ကုလားထိုင်ကြီးလည်း ရှိတယ်ဆိုလား။ ရှိသေးလားပဲနော်
လှလိုက်တဲ့ ရှု့ခင်းတွေ ...
သွားလည် ချင်တယ် ..
ဒီလို နေရာတွေကို တကယ်ရောက်ဖူးချင်မိတယ်..
မချောကြောင့် သွားချင်တဲ့ နေရာ တစ်နေရာ တိုးလာရပြန်ပြီ။ လိုက်ပို့ ...ဗျို့ လိုက်ပို့ ...
ရက်ရက်စက်စက်ကိုလှတဲ့ ကချင်မြေနော်။ မချောရဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်လိုပဲ အိပ်မက်ထဲရောက်သလိုတောင်ခံစားရတယ် မရေ..။ လှလိုက်တာလို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရေရွတ်မိတဲ့အထိ။ မချောဆီလာလည်ရင် လိုက်ပို့ပါးD တောင်ထိပ်ကဘောလုံးကွင်းမှာ ကစားချင်လို့း))
ဆရာငြိမ်းအေးအိမ် နဲ့ အစ်မချောကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဒီလောက် လှပလွန်းတဲ့နေရာတွေ ရှိနေပါရက်နဲ့..၊ ဘာကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ မဖွံ့ဖြိုးတာလဲ...။ ဘာကြောင့် အချင်းချင်း စစ်တိုက်နေရတာလဲ..။
ကွန်နက်ရှင်နှေးနေတာကြောင့် ပုံတွေ အားလုံး မြင်ရဖို့ အတော်စောင့်ခဲ့ရတယ်။ တကယ့်ကို အံ့သြဖွယ်ရာ သဘာဝအလှတွေ ပါဘဲ။ ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်ရဲ့ လက်ရာမြောက်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး နစ်မျောသွားလိုက်တာ အကြာကြီးပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်သူ၊ ပြည်နယ်သားများ ငြိမ်းအေးကြပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းယုံမှတစ်ပါး....။
အမရေ. . . ကချင်ပြည့်နယ်ကို မရောက်ဖူးပေမယ့် အမတင်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး တကယ်သွားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမိတယ်
Thank you so much for those who took and post it on the blog !
I wish I could go and enjoy there one day :)
သဘာဝ အလှတွေလည်း နီးရက်နဲ့ဝေး။
သိပ်ကိုလှတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ငိုကြွေးနေတဲ့ တောင်တွေကိုမြင်တော့ ဒီလိုပဲတွေးနေမိတယ်...။
တော်တော်လေးလှတဲ့နေရာတွေပဲနော်...ကျွန်တော့ကို နိုင်ငံခြားဘာသားစကားသင်ပေးနေတဲ့(နိုင်ငံခြား)ဆရာမကပြောတယ်... ဒီနေ့ သူတို့နိုင်ငံမှာနှင်းစကျတယ်.နင်ဘယ်လိုခံစားရလဲမေးတယ်..ကျွန်တော်က ဘယ်လိုမှမနေပါဘူးလို့ပြောတော့...ဆရာမက နင်တို့နိုင်ငံက အပူပိုင်းနိုင်ငံ...နှင်းမြင်းဖူးလို့လားတဲ့..ဒါနဲ့ကျွန်တော် ကချင်ပြည်နယ် အကြောင်း အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီး ဆရာမကို ပြလိုက်တော့ သူအံသြသွားတယ် ...ကချင်ပြည်နယ်မှာရေခဲတောင်တွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့လေ...မြန်မာပြည်သူလာလည်တုန်းက ကချင်ပြည်ကိုမရောက်ဖူးဘူးတာရယ် ..ရေခဲတောင်တွေအကြောင်း မကြားဖူးတာရယ်ကြောင့်နေမယ် သူအံသြသွားပါတယ်....ပြည်တွင်းစစ်တွေသာမရှိတော့ရင် သိပ်ကောင်းမယ်ဗျာ....မချောကို သိချင်တာလေး တစ်ခုမေးချင်ပါတယ် အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက မေးခွန်းတစ်ခု မချောပြန်ဖြေထားတော့ ရှမ်းစော်ဘွားနိုင်ငံဆိုတာ ရွှေလီမြစ်ကြောင်းတလျောက်မှာ တည်ခဲ့တယ်..နောက်ပိုင်း နိုင်ငံပြိုကွဲခဲ့တယ်လို့အမချောဖြေခဲ့တယ်နော်..အခုသိချင်တာက ကချင်ဆိုတာရော အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့လားဆိုတာသိချင်ပါတယ်....ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါ အမချောသိရင်ပြန်ဖြေပေးပါအုံးနော်...<<ပြည်တွင်းစစ်တွေ၇ပ်စေချင်တဲ့ မချောရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ဦး...>>
သေ နတ် ကိုင် ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက် ဖို့ကြိုး စားနေကြသရွေ့ တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ အ လှမ်းဝေး နေအုံး မှာဘဲ မချော ရေ။
လှလိုက်တဲ့ ရှုခင်းတွေချောရေ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ရှုခင်းတွေအရမ်းလှတော့ ဓာတ်ပုံတွေကို အခါခါပြန်ကြည့်သွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေချင်လို့ Page Link ကို copy ပြီး facebook ပေါ် Share လိုက်တယ်လို့တဆက်တည်း ခွင့်တောင်းပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
အေးဗျာ။ မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဘာသာပြန်ပြန်မေးမိနေတယ်။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုအလှတွေရှိနေတာမသိခဲ့ပါလားပေါ့။ဘာဆက်လုပ်ပေးသင့်လဲ။ဒီအလှတွေဖော်ပေးနေသူတွေရှိနေတာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ မချောရော၊ ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်ရော၊ ကျေးဇူးပါခင်ဗျား။
မပြော မရှိ ပါနဲ့...
အဲဒီလို သဘာဝ အလှအပ ရှုခင်းပုံတွေကို ကြည့်ရင်း ကြက်သီးမွေးညှင်းများတောင် ထ ပါတယ်...
really, really marvelous scenery!!!
အမရေ..အရမ်းလှတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ရှုခင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရှယ်ချင်လို့ facebook မှာ တင်ချင်လို့ပါ။ http://www.missgreenlady.com/ ဆိုပီး ပုံတိုင်းမှာ credit ပေးပြီးတင်မှာပါအမ.. ရှဲချင်ရုံသက်သက်ပါ..ကျေးဇူးပြုပြီး ခွင့်ပြုပေးပါနော်
ko>>ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်း မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အီးမေလ်းနဲ့ ဖြေထားပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ပုံရိပ်များကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုအားပေးကြသော မိတ်ဆွေများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်..
ဒီလို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အရမ်းလှပတဲ့ နေရာလေးတွေကို အသေအချာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်မိသလို ရှာဖွေတင်ပြပေးတဲ့ မမချောကိုလည်း အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ တကယ်ကို လူတိုင်းရောက်အောင် သွားဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။
ဓာတ်ပုံထဲက နေရာတွေ အကုန်လုံးနီးပါးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပေ
မယ့် ခုလိုအဝေးကနေပြန်ကြည့်ရမှ တော်တော်လှမှန်းသိတော့တယ်ဗျ။ အိမ်ပြန်ချင်တယ် အဟင့်..
လွမ်းလိုက်တာ ကိုယ့်ဒေသလေးကို ။ ပူစပ်ပူလောင်တွေ ကြားမှာ ငြိမ်းအေးရာ ဖြူစင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒီပုံလေးတွေ မြင်တော့ ကချင်ပြည်နယ်သူဖြစ်ရက်နဲ့ စိန်လုံတောင် မရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ အီန္ဒိယရဲ့ မြောက်ပိုင်း မူဆိုရီဆိုတဲ့ ရေခဲတွေကြားတော့ ရောက်ခဲ့ရတယ်။ ဘ၀ကတော့ ဒီလိုပါဘဲလေ။